आज पुष २१ गते बुधबार, कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस् राशिफल! – Khabar Patrika Np
आज पुष २१ गते बुधबार, कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस् राशिफल!
प्रकाशित मिति: बुधबार, पौष २१, २०७८ समय: १:०८:२०
भोलि पुष २१ गते बुधबार, कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस् भोलिको राशिफल!
By admin -January 4, 2022093
अरुको विचारहरु अपनाउनु राम्रो हुनेछ। घर र परिवारबाट काम गर्ने समयमा समाधानकारी विचार अपनाउनुहोला। बोलीमा ध्यान राख्नुहोला। कसैसँग बहस नगर्नुहोला। समयमा खाना नखानुहोला। खर्चमा रोक लगाउँदा अनावश्यक खर्चबाट बच्न सकिन्छर आर्थिक मामिलामा होशियार रहनुहोला ।
आर्थिक जिम्मेदारी प्रति ध्यान दिनुहुनेछ । आर्थिक लाभ होला। मनमा उत्साह तथा विचारको स्थिरताको कारण सबै कार्य गर्नुहुनेछ। मनोरंजन, सौंदर्य-प्रसाधन, आभूषण आदिमा खर्च हुनेछ।
बोलि र व्यवहारमा सावधान रहनुहोला। आवेश र उग्रताको कसैसँग झगडा नहोस यस कुराको ध्यान राख्नुहोला। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछैन। खास गरेर आँखामा पीडा हुनेछ। अकस्मातको योग रहेको छ। परिवारसँग झगडा हुना सक्ला। आय कम र खर्च अधिक हुनेछ। ईश्वरक ध्यान र आध्यात्मिकताबाट मन शान्त हुनेछ।
दिन लाभदायक रहेको छ। आयको साधन वृद्दि हुनेछ। आकस्मिक धन मिल्नेछ। आर्थिक योजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुहुनेछ। कुनै मनोहर स्थलमा घुमफिर गर्नुहुनेछ।
दिनको प्रारंभमा शारीरिक र मानसिकरुपले अस्वस्थता र निराशा अनुभव गर्नुहुनेछ। क्रोधको मात्रा अधिक रहनेछ। मध्यान्नपछि तपाईको शारीरिक र मानसिक स्थितिमा सुधार हुनेछ। परिवारमा आनन्द को वातावरण हुनेछ।
प्रेम र धिक्कारक राग-द्वेष जस्ता भावनालाई छोडेर समतापूर्वक व्यवहार गर्नुहोला। आध्यात्मिक क्षेत्रमा सिद्धि प्राप्त हुने योग रहेको छ। मध्यान्नपछि स्वास्थ्यमा शिथिलता र व्यग्रता अनुभव हुनेछ। क्रोधको मात्रा अधिक रहनेछ।
दिनको प्रारम्ब आनन्दमय रहनेछ। विचारमा उग्रता र अधिकारत्वको भावना मनमा रहनेछ। आर्थिक लाभ हुनेछ। मध्यान्नपछि समय अनर्थ नहोस यस कुराको ध्यान राख्नुहोला। बोलिमा ध्यान राख्नुहोला। हितशत्रुबाट सावधान रहनुहोला।
धन-सम्बन्धित आयोजना गर्नको लागि शुभ समय रहेको छ। मध्यान्नपछि मित्र तथा आफन्तसँग बसाई हुनेछ। खान-पानको स्वाद पनि लिनुहुनेछ। वैचारिक स्तरमा आवेगलाई ध्यान राख्नुहोला। पारिवारिक जीवनमा आनन्द छाईरहनेछ।
शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला। अधिक श्रमपछि कार्यमा सफलता मिल्नेछ। प्रवास-पर्यटनलाई टाल्नुहोला। मध्यान्नपछि समय अनुकुल रहनेछ। शरीरमा स्फूर्ति संचार हुनेछ। आर्थिक लाभ होला। व्यावसायिक आयोजन राम्रोसँग हुनेछ।
आपत्तिकर विचार, व्यवहार र आयोजनबाट टाढा रहनुहोला। कुनै पनि कार्यमा शीध्र निर्णय नलिनुहोला। परिवारसँग परस्पर मनमुटाव नबढाउनुहोला। कार्य सफलताको लागि अधिक परिश्रम गर्नुपर्ने हुनेछ।
आवश्यक कार्यको निर्णय नलिनुहोला। नयाँ कार्य प्रारम्भ। नगर्नुहोला। मध्यान्नपछि मानसिक व्यग्रता वृद्धि हुनेछ। सम्पत्ति विषयक दस्तावेज गर्नको लागि समय अनुकूल रहेको छैन। विधार्थीको लागी दिन मध्यम रहेको छ। आमा स्वास्थ्यको विषयमा चिन्ता रहनेछ। मनलाई स्वस्थ राख्ने प्रयास गर्नुहोला।
स्वार्थी व्यवहारलाई त्यागेर अन्य विषयमा विचार गर्नुहोला। घर, कुटुंब तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा समाधानकारी व्यवहार अपनाउनुहोला। विवाद तथा मनदुःखलाई टाल्नुहोला। नयाँ कार्य गर्नको लागि उत्साहित रहनुहुनेछ। द्विधापूर्ण मानसिकताले निर्णय नलिनुहोला।